Semalt dia manolotra efatra Plugins tena mahatsikaiky mba handravàna tranonkala
GitHub dia programa haingana mivezivezy ; Ampiasaina amin'ny ordinatera ny ordinatera ary manolotra ny fonctionnaire (SCM) ho an'ny mpampiasa azy. Izany dia ahafahanao miditra amin'ny tranonkala maromaro ary manodina azy ireo araka ny zavatra takinao. GitHub dia manolotra drafitra ho an'ny fampiasana manokana sy fametrahana malalaka. Azonao atao ny mandray andraikitra samihafa momba ny angon-drakitra miaraka amin'ity fitaovana ity. Nolazain'i GitHub fa hanaparitaka pejy maherin'ny 40 tapitrisa ary nanompo hatramin'ny 10 tapitrisa mpampiasa manerantany - certificate of coverage.
Kitapatsoratra efatra hanapahana pejy web:
1. Google Plus Mpanoratra:
Google Plus Authorship dia WordPress plugin miaraka amin'ny endri-javatra sy fahafaha maro. Amin'izay dia azonao atao ny manaparitaka pejy maro araka izay tianao. Voalohany, mila mamantatra sy mamantatra ireo tranonkala tianao haleha. Ny dingana manaraka dia ny manasongadina ny angon-drakitra na mampiditra URL ny tranonkala, ary avelao ity plugin ity hanatanteraka ny asany. Afaka miditra ao amin'ny GitHub izy ary manakatona pejy dimy arivo amin'ny aterineto mandritra ny adiny iray, tsy manelingelina ny kalitao. Ankoatra izany, ity plugin ity dia ahafahantsika manampy sary G + ho an'ny valin'ny fikarohana, manolotra mpanoratra ho an'ireo mpanoratra maro ary manamafy ny fahamarinany. Izy io dia manana endrika interface ary afaka mamoaka ny angona azo amonoana sy azo henoina ho anao.
Feed Delay dia iray amin'ireo WordPress plugins tsara indrindra. Azo atao ho an'ny orinasa madinika sy maoderina ary mety hikapoka pejy maro ho anao araka izay tianao. Ankoatra izany, ny Feed Delay dia mamoaka ny votoatiny, manaparitaka azy ary mamoaka azy amin'ny alalana manokana, noho ny bolongany sy ny mpandefa azy amin'ny fanaovana azy. Hatramin'ny fanombohany, Feed Delay dia nanatsofoka pejy miisa maherin'ny telo tapitrisa mahomby, ary mitombo isan'andro io isa io isan'andro.
3. Hafatry ny Feed-Scraper:
Ny fitrandrahana sy ny angon-drakitra dia natao indrindra amin'ny bots / crawlers, tsy misy fiaraha-miasa amin'ny olombelona. Amin'ny Hafatry ny Feed-Scraper, ianao dia tsy afaka ny hikapoka ny pejy web tiany fotsiny fa mikaroka ny tranonkalanao ary manatsara ny fikarohana ny motera fikarohana. Afaka miditra amin'ny rindrambaiko GitHub izany ary mety ho an'ny orinasa, mpandrindra, ary webmasters.
4. Copyright Free plugin
Mbola iray ihany ny WordPress plugin hafa manana karazana endri-javatra. Amin'ny Copyright Free, afaka manangona pejy maro araka izay tianao ianao. Ity plugin ity dia manome taratasy fanamarinana hanehoana raha misy olona mangalatra ny votoatiny. Izy io dia mifanaraka amin'ny vohikala rehetra ao amin'ny WordPress sy ny bilaoginy manokana ary manome anao ny angon-drakitra mahomby ao anatin'ny fotoana fohy. Ambonin'izany, tsy mila manana programa na fahaiza-manao koditra ianao ary afaka mandray soa avy amin'io serivisy io na aiza na aiza.
Nanomboka tamin'ny Oktobra 2007 ny sehatra GitHub. Ny tetikasa amin'ny GitHub dia azo alaina na manipuler amin'ny interface Git command line. Manampy antsika handefa tranokalam-bahoaka amin'ny tranokalam-pifaneraserana iray izany ary manatanteraka asa maro samihafa. Ireo plugins etsy ambony ireo dia afaka manangona angon-drakitra avy amin'ny RSS feeds, tranonkalan'ny tambajotra sosialy, famoaham-baovao, vavahadin-tserasera ary bilaogy manokana. Tokony hamorona kaonty manokana ianao mba hanatsarana ny angona ao anaty format malalaka, na ny tranokalam-panjakana aza no mijery sy mivoaka tsy misy kaonty.